Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii Jaaliyada Ogaden Iyo Orodyahanka Feyisa Lilesa.
Kulankii Jaaliyada Ogaden Iyo Orodyahanka Feyisa Lilesa.
Posted by Daljir	/ November 12, 2016
Waftigi Jaaliyada Ogadeniya ee Kaqeyb galay Dhageysigii Guriga Baarlamaanka Brussel ayaa sidoo kale kulan la yeeshay Orodyahanka Caanka ah ee kasoo jeeda Qowmiyada Oromada Feyisa Lilesa. Orodyahankan oo ka goostay Taliska Ethiopia kadib markii uu ku guuleystay Bilada Orodka dheer ee ” Rio 2016 Olympic Marathon”.
Fadlan Sawirada aad ha u yareynina Size fiican kusoo galiya boga hore (500 width 700 hight) hadii kale lamaba arkayo arrintaas bal sawirada ONA lasoo galiyo dib haloo fiiriyo. Gaar ahaan sawirada Xayaysiiska ah oo waxbaba laga arkeyn.
Jaaliyada Ogaden oo kulan laqaatay orodyahanka Feyisa Lilesa.
Waftiga kaqeyb galay Kulankan waxaa kamida Mudane Xamse Shariif iyo Halgame Qorane oo matalayay Jaaliyada Ogaden. Orodyahankan ayaa qaatay Calanka Soomalida Ogaden islamarkaasna sheegay innuu aad ugu faraxsanyahay soo dhaweynta ay u sameeyeen Jaaliyada Somalida Ogaden iyo kulanka uu la qaatay.
Orordyahankan ayaa lagu casuumay Guriga Baarlamaanka Europe dhageysi loogu qabtay Qadiyada Oromada midaas oo sidoo kale lagu casuumay xubno kamida Jaaliyada Ogadeniya ee UK. Kulankan ayaa dhacay taariikhdu markay aheyd 10 November 2016 Magaalada Brussel ee Belgium.
Jaaliaydaha Oromada iyo Jaaliyadaha Ogaden ayaa leh xidhiidh wada shaqeyn iyo iskaashi xoogan oo ay kaga wada howlgalaan dibadaha.